Khudbad ku saabsan gumeysiga - Aimé Césaire - Afrikhepri Fondation
Talaado, Oktoobar 19, 2021
Dib ugu noqo jadwalka Afrika
Harriet Tubman, oo ah dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka Afrikaanka ah iyo haweenka
Khudbad ku saabsan gumeysi - Aimé Césaire
Une ilbaxnimada taas oo caddaynaysa inaanu awood u lahayn xallinta dhibaatooyinka ay shaqayntoodu dhaliso waa ilbaxnimo xumaatay. Ilbaxnimo doorta inay indhaheeda ka xidho dhibaatooyinka ugu muhiimsan waa ilbaxnimo burburtay. Ilbaxnimo ku xeeran mabaadi'deeda waa ilbaxnimo dhimanaysa.
Xaqiiqdu waxay tahay in waxa loogu yeero ilbaxnimada reer Yurub, ilbaxnimada reer Galbeedka, oo ay u qaabeeyeen laba qarni oo nidaamkii bourgeois, aan awood u lahayn xallinta labada dhibaato ee waaweyn ee jiritaankiisu u horseeday: mushkiladda horudhaca iyo dhibaatada gumaysiga; taasi, oo loo tixraaco caqabadda caqliga xagga caqliga, Yurubtaani awood uma lahan inay iskeed isu caddeyso; iyo weliba, inay aad iyo aad u sii badan, waxay isku aruursataa munaafiqiinta oo aad uga sii darnayd inay ugu yaraato fursadda khiyaanada.
Europe waa mid aan la aqbalin.
Waxay u muuqataa in tani ay tahay u fiirsashada ay istiraatiijiyad Mareykanku ugu kalsoon yihiin si hoose Lafteeda tan dhib malahan. Waxa ugu culus ayaa ah in "Yurub" ay tahay mid anshax ahaan, ruux ahaan aan loo diidi karin.
Maantana waxay soo baxday inaysan ahayn oo keliya dadka reer Yurub ee wax xukumaya, laakiin in dacwada lagu soo oogay heer caalami ah tobanaan iyo tobanaan milyan oo rag ah, oo ka soo jeeda adduunka hoose addoonsiga, waxay isu diyaariyeen inay garsoorayaal noqdaan.
Waad ku dili kartaa Indochina, jirdil ka dhacdaa Madagascar, xabsi ku yaal Madow Madow, oo aad uga dhex oogan kartaa Galbeedka Indies. Gumeysteyaashu waxay hadda ogaadeen inay ka faa'iideystaan ​​gumeystaha. Waxay ogyihiin in "sayidyadooda" ku meel gaarka ah ay been sheegaan.
Sidaas daraaddeed sayidyadooda waa ku adag yihiin.
Maaddaama maanta la i weydiistay inaan ka hadlo gumaysiga iyo ilbaxnimada, aan toos ugu tagno beenta ugu weyn ee ay dadka kale oo dhami ka bataan.
Colonization iyo midnimada
Habaar ugu caamsan ee arrintani waa in uu noqdo dupe aamin ah oo munaafaqnimo wadareed, xirfad u leh soo bandhigista dhibaatooyinka si si fiican looga sharciyeeyo xalalka xun ee loo keenay.
Tani waxay u dhigantaa in la yiraahdo muhiimadda halkan waa in si cad wax loo arko, in si fakar loo fikiro, si qatar ah loo maqlo, in si cad looga jawaabo su'aasha bilowga ah ee aan waxba galabsan: waa maxay mabda'a ahaan mabda 'ahaan? In la isku raaco in aysan ahayn; mana aha wacdinta, ama shirkad samafal, ama dib uma riixeyso soohdimaha jaahilnimada, cudurka, maquuninta, ama kordhinta Eebbe, iyo kordhinta Sharciga, in la qirto mar uun iyo dhammaanba, iyada oo aan la rabin in laga leexdo cawaaqibka , in tilmaanta go'aanku ay tahay hal-abuurka iyo burcad-badeedka, raashinka weyn iyo mulkiilaha, dahab qode iyo baayacmushtariga, rabitaanka iyo xoogga, iyadoo, gadaal, wuxuu hoos u dhigay, shar, nooc ka mid ah ilbaxnimo taas oo, hal dhibic ka mid ah taariikhdeeda, ay isu aragto inay ku qasban tahay, gude ahaan, inay ballaariso tartanka dhaqaalaheeda iska soo horjeeda ee heer caalami ah.
Anoo sii wata falanqeynteyda, waxaan u arkaa in munaafaqnimadu ay dhowaan tahey; in Cortez midkoodna, oo ka ogaanaya Mexico City dusha sare ee teocalli weyn, ama Pizarre oo hortaagan Cuzco (oo aad uga yar Marco Polo xagga hore ee Cambaluc), uma mudaharaadayo inuu yahay caqabadaha amarka sare; inay dilaan; inay dhacaan; inay leeyihiin koofiyad, warmo, hunguri; in diyaaradaha wax duqeeya ay yimaadeen mar dambe; in mas'uuliyadda ugu weyn ee aaggan tahay lugta masiixiga, maxaa yeelay isle'egyo aan daacad ahayn ayay sameeyeen
Masiixiyadda = ilbaxnimada; Dhibaatada jaahwareeriga ah, oo laga yaabo inay ka dhalan karto colonialist iyo cawaaqib cunsuriyadeed, dhibbanayaashoodu waxay noqon lahaayeen Indiyaan, Yellows, Negroes.
Taasi waa degtay, waxaan qirayaa in ilbaxnimooyin kala duwan oo xiriir lala yeesho ay wanaagsan tahay; in la guursado adduunyo kala duwan ay fiican tahay; in ilbaxnimo, wax kastoo caqligeeda gudaha ah, markay iskeed isu rogto, u engejiso; isweydaarsigaasi waa oksijiin halkaan ah, iyo in nasiibka weyn ee yurub uu yahay isgoys, iyo in, uu ahaado meesha joomatariyeed ee fikradaha oo dhan, qabashada falsafadaha oo dhan, meel lagu soo dhoweeyo dhammaan dareenka ayaa ka dhigtay dib-u-qaybiyeha ugu fiican ee tamarta.
Laakiin markaa, waxaan weydiinayaa su'aasha soo socota: gumeysigu miyuu xiriir la sameeyay? ama, haddii aad doorbideyso, dhammaan qaababka xiriir loola sameeyo, iyadu ma iyadaa ugu wanaagsaneyd?
Waxaan kuugu jawaabayaa maya.
Aniguna waxaan leeyahay laga soo bilaabo gumaysigii ilaa ilbaxnimadii, masaafada waa mid aan xad lahayn; in dhammaan safaradii gumeystaha ee la aruuriyay, dhamaan qaynuunnadii gumeystaha ee la sameeyay, dhammaan wareegtooyinkii wasaaradaha ee la diray, ma jiro wax qiime aadanaha ah oo lagu gaari karo.
Waa inaan marka hore barannaa sida gumeysigu u shaqeeyo si loo kala saaro gumeystaha, si naxariis darro ah loogu macneeyo macnaha suugaaneed ee ereyga, hoos loo dhigo, lagu toosiyo dareennada la aasay, damacnimada, rabshadaha, naceybka jinsiyadda, akhlaaqda akhlaaqda, oo muujiya in, markasta oo Vietnam ay jirto madax goos goos ah iyo indho fiiqan iyo in Faransiiska aan aqbalno, gabar la kufsaday iyo in Faransiiska aan aqbalno, Malagasy la jirdilay iyo in Faransiiska waan aqbalnaa, waxaa jira guul ilbaxnimo oo ku miisaamaysa culeyskeeda dhimatay, dib u dhac caalami ah oo dhacaya, gaangiin ku dhacda, diirad saarista infekshinka faafa iyo in dhamaadka dhammaan heshiisyadan la jebiyey, beentaas la faafiyay oo dhan, dhammaan safarradan ciqaabta ah ayaa loo dulqaatay, dhammaan maxaabiistan oo xirxirnaa iyo "su'aalo la waydiiyay", dhammaantood wadaniyiintaan la jirdilay, dhammaadka hankan dhiirrigelinta midab-takoorka ah, ee ku saabsan faankan faan-doonka ah, waxaa jira sunta lagu beeray xididdada Yurub, iyo horumarka qunyar socodka ah laakiin hubaal ah qaaradda.
Ka dibna, maalin wanaagsan, bourgeoisie waxaa hurdada ka toosay naxdin weyn: soo-noqoshada ayaa mashquul badan, xabsiyada ayaa buuxsamay, kuwa jirdilka sameysanaya, dib u sifeeya, ka wada sheekeysta waxyaabaha kahadalka ah.
Waan la yaabnay, waannu xanaaqsanahay. Waxaan dhahnaa: “Sidee xiiso leh! Laakiin, bah! Waa Naasiyiin, way dhaafi doontaa! Oo waanu sugaynaa, waana rajaynaynaa; oo waxaan iska aamusnaa runta, inay tahay waxashnimo, laakiin bahalnimada ugu sareysa, waxa taaj, taa soo koobeysa nolol maalmeedka bahalnimada; in ay tahay Naasiyiin, haa, laakiin in ka hor intii aanaan noqon dhibbane, waxaan ahayn gacan-yareheeda; in Naasigan, aan u dulqaadanay ka hor intaan la marin, waan ka saarnay, indhaha ayaan ka qabanay, waan sharciyeynay, maxaa yeelay, ilaa waqtigaas, lagu dabaqay oo keliya dadka aan Yurubta ahayn; in Naasigan, aan beernay, anagaa masuul ka nahay, oo dhago la ', oo daloolin doona, oo qulqulaya, ka hor intaanad ku liqin biyaheeda casay, dhammaan dildillaaca ilbaxnimada. Reer Galbeed iyo Masiixi.
Haa, way fiicnaan lahayd in wax laga barto, caafimaad ahaan, si faahfaahsan, tillaabooyinka Hitler iyo Hitlerism oo loo muujiyo mid aad u kala duwan, aadamiyad aad u wanaagsan, Christian bourgeois Christian qarnigii sagaal iyo tobnaad in uu ku qaato Hitler oo aan ogeyn, in Hitler uu ku dhex nool yahay, in Hitler uu yahay jinni, in haddii uu cambaareynayo ay tahay caqli la'aan, iyo tan hoose, waxa uusan cafiyin Hitler, maahan dambiga laftiisa, waa dambiga ka dhanka ah ninka, maahan dulli ninka laftiisa, waa dembiga ka dhanka ah ninka cadaanka ah, waa dulmiga ah ninka cadaanka ah, iyo inuu dalbado hababkii gumaystayaasha reer Yurub, kaasoo ilaa iyo hada ka socda uun carabta Aljeeriya, qabowga Hindiya, iyo indhihiisa Afrika.
Oo kani waa cayda weyn ee aan ula dhaqmayo beenta-bini-aadamnimada: hoos u dhigista xuquuqda aadanaha muddo aad u dheer, waanan haystay, weli waxaan haystaa fikrad cidhiidhi ah oo kala daadsan, qayb ahaan iyo qayb ahaan iyaga ka mid ah. iyo, dhammaantiis, cunsuriyad xun.
Waxaan wax badan kala hadlay Hitler.
Sababtoo ah way u qalantaa: waxay suurtagal ka dhigeysaa in la arko wax weyn oo la fahmo in bulshada hanti-wadaagga ah, marxaladda ay hadda ku jirto, aysan awood u lahayn aasaasidda xuquuqda dadka, sida ay u noqoto mid aan awood u lahayn helitaanka anshax shaqsiyeed. Haddii aan jeclaanno iyo haddii kaleba: dhammaadka kullanka-de-sac
Yurub, waxaan ula jeedaa Yurubta Adenauer, Schuman, Bidault iyo in yar oo kale, waxaa jira Hitler. Dhamaadka raasumaalka, oo u hamuun qaba inuu noolaado, waxaa jira Hitler. Dhamaadka bani-aadmiga rasmiga ah iyo ka noqoshada falsafada, waxaa jira Hitler.
Oo haddaba sidaas daraaddeed wejigaygaan afkayga ugu ridaa.
“Waxaan rajeyneynnaa sinnaan, laakiin xukunka. Wadanka ajnabiga ah waa inuu noqdaa wadan mar kale shaqaale, shaqaale maalmeedka beeraha ama shaqaalaha warshadaha. Maaha su’aal ah in meesha laga saaro sinaan la’aanta raga ka dhex jirta, laakiin waa in la kordhiyo oo laga dhigo sharci. "
Waxay u egtahay mid fiiqan, madax-xishood ah, nacayb ah, oo naga dhigaya dhexda qaylo-dhaanta. Balse hoos u deg hal darajo.
Yuu hadlayaa Waxaan ka xishoonayaa inaan idhaahdo: waa bani-aadamka reer galbeedka, falsafada "ujecel" In magaciisu yahay Renan waa wax kadis ah. Haddii laga soo qaatay buug cinwaankiisu yahay: Dib-u-habeynta Maskaxda iyo Akhlaaqda, haddii ay ku qoran tahay Faransiiska, wixii ka dambeeyay dagaal uu Faransiisku doonayay sharci ka dhan ah xoogga, oo in badan ka hadlaya bourgeois mores. .
Dib-u-cusboonaysiinta jinsiyadaha liita ama kuwa liidata ee jinsiyadaha ka sarreeya ayaa ku jira amarka soo-saarista ee aadanaha. Ninka caadiga ahi had iyo jeer waa inuu nala joogaa, oo waa nin sharaf leh, gacantiisa culusna aad ayey ugu habboon tahay in seefta la laalo marka loo eego aaladda adeegga. Halkii uu ka shaqeyn lahaa, wuxuu doortaa inuu la dagaallamo, taasi waa, inuu ku laabto gobolkiisii ​​ugu horreeyay. Regere imperio populos, taasi waa shaqadeena. Ku shubo wax qabadkan dhammaan waddammada, sida Shiinaha, ugu baaqaya qabsashada shisheeye. Dalxiisayaasha khalkhal geliya bulshada reer Yurub, waxay sameeyaan dixiriga dixiriga ah, raxan u eg kuwa Franks, Lombards, Normans, mid waliba doorkiisa ayuu ku jiri doonaa. Dabeecaddu waxay sameysay tartan shaqaale, waa tartanka Shiinaha, ee qallafsanaanta cajiibka ah ee gacanta iyada oo aan wax dareen ah oo sharaf ahi jirin; ugu xukumaan si cadaalad ah, iyada oo laga qaadanayo, iyada oo loo daneynayo dowlad noocan oo kale ah, dower ku filan oo loogu talagalay faa'iidada tartanka guuleysta, waa lagu qanci doonaa; tartanka shaqaalaha dhulka waa negro; wanaag u muuji oo aadamnimo u yeelo, oo wax waluba way hagaagi doonaan; tartanka sayidka iyo askartu waa tartanka Yurub. Yaree tartankan sharafta leh si aad uga shaqeyso ergastula sida neerfaha iyo Shiinaha, way kacdoontaa. Jabhad kasta waxaa nala jooga, ama ka yar ama ka yar, askari ku guuldareystay shaqadiisa, oo loo sameeyay nolol geesinimo leh, oo aad codsaneyso hawl ka soo horjeedda jinsigiisa, shaqaale xun, aadna u fiican askari. Si kastaba ha noqotee, nolosha ka gadoodda shaqaalaheena waxay ka farxin doontaa Shiine, fellah, noolaha aan sinaba u ahayn ciidan. Qof kastaa ha sameeyo wixii loogu talagalay, oo wax walbana way hagaagi doonaan. "
Hitler? Rosenberg? Maya, Renan.
Laakiin bal aynu sii wadno tallaabo dheeraad ah. Oo waa siyaasi sharaf leh.
Ayaa mudaharaadaya? Qofna, intaan ogahay, markuu Mudane Albert Sarraut, khudbad u jeedinayo ardayda Dugsiga Gumeysiga, wuxuu barayaa inay ilmo ahaan u noqonayso ka soo horjeedka shirkadaha gumeysiga ee reer Yurub "waa xuquuq la sheeganayo oo ah inuu qabsado mana ogi waxa kale ee kale xaq u lahaanshaha go'doominta kulul ee ku waari doonta gacmaha aan awood u lahayn haysashada wax aan micno lahayn ee hantida shaqo la'aanta ".
Oo bal yaa raali ka ah inuu maqlay RP Barde gaar ah oo hubaal ah in alaabta adduunkani, "haddii ay si aan kala go 'lahayn loo qaybiyay, maadaama ay noqon lahaayeen iyaga oo aan lahayn gumeysiga, ma ka jawaabi doonaan qorshaha Ilaah, ama shuruudaha kaliya ee beesha aadanaha "?
Waxaa la filayaa, sida uu sheegay saaxiibkiis diinta kiristaanka, Aabbe Muller: "in bini'aadamnimadu aysan aheyn, inayna la xanuunsan karin awood darrida, taxaddar la'aanta, caajiska dadka bahalnimada ah inay weligood ka tegaan iyadoon shaqo laga helin hodantinimada Ilaah iyaga ku aaminay howl ay ka dhigaan inay u adeegaan wanaagga dhammaan ”.
Waxaan ula jeedaa qoraa ruqsad haysta, maahan aqoonyahan, ma ahan wacdiye, maahan siyaasi, ma ahan mudaharaade sharciga iyo diinta, ma ahan "difaaca qofka aadanaha".
Haddana, afafka Sarraut iyo Bard, Muller iyo Renan, iyadoo loo marayo afka dhammaan kuwa xukumay oo u arkay inay sharci yihiin in lagu dabaqo dadyowga aan reer Yurub ahayn, iyo in laga faa'iideysto quruumaha xoogga badan oo ka qalab wanaagsan, " nooc ka mid ah la wareegidda dan guud ', horaanba Hitler uhadlayay!
Xageen doonayaa inaan aado? Fikradan: in qofna dambiile loo xukumi karin, in uusan midkoodna qabsan karin ciqaab la'aan; in ummad gumaysata, in ilbaxnimo xaq u leh gumaysiga ay horayba u ahayd ilbaxnimo xanuunsan, ilbaxnimo akhlaaqeed leh, taas oo, aan la xakamayn karin, iyada oo taa ka dambaysa, laga soo bilaabo diidmo illaa loo diido, loogu yeero Hitler, waxaan ula jeedaa ciqaabteeda.
Maqaallada la soo jeediyay
Chaka Zulu: guuleyste iyo aasaasihii qarankii Zulu
Ku soo celinta Afrika shaqooyinkii farshaxanka (Video)
Xuquuqda daabacaadda © 2022 Afrikhepri
Gacan ka geyso kor u qaadida boggan adigoo la wadaagaya boggan
Haddii aad rabto inaad akhrido dhammaan maqaallada, waa inaad hal mar la wadaagtaa goobta. Mahadsanid
Daaqadani si otomaatig ah ayey u xirmi doontaa ilbidhiqyada 13